www.xamarcade.com » (Daawo Sawirada) Haweeney Isbuucii Sadex Maalin wax aragta inta kalana Indho Beesha!
(Daawo Sawirada) Haweeney Isbuucii Sadex Maalin wax aragta inta kalana Indho Beesha!
Haweenay u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Natalie Adler oo 30-sano jir ah, ayaa waxaa heesata dhibaato dhinaca araga ah oo nuuceeda aan hore dunida loogu arag xalna ay u waayeen Dhaqaatiir badan.
Natalie Adler ayaa iyada oo jirta 17-sano waxaa xanuun lamid ah Daafka uu kaga dhacay indhaha, waxaana xanuunkaasi uu sababay in Haweeneydaasi sadex maalin oo kamid ah Isbuucii ay wax aragto inta kalana ay wax arki weyso oo indha beesha.
Dhaqaatiir badan oo daaweyn loogu geeyay haweeneydan ayaa ku guul dareestay in wax ka qabtaan dhibaatada xaga arag ka heesata haweeneydan, waxa ayna dhaqaatiirta qaar ku tilmaameen arintan mid mucjiso ah aysan horey u arag.
Haweeneydan ayaa sheegtay in xaaladan indho beelka maalmaha ah ay isku aragtay 13-sano kahor waxa ayna tilmaantay in dhaqaatiir badan ay tagtay wax ka qaban waayeen dhibaatada araga ka heesata.